Myanmar Music Art | Korea
Myanmar Music Art ရဲ့Fan Page မှာတောင်းဆိုထားတဲ့ အဆိုတော် ” Tae Yang ” ရဲ့ သီချင်းကောင်းတပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ” Wedding Dress ” ဆိုတဲ့ အချစ်သီချင်းကောင်းကောင်းလေးကို အားလုံးခံစားလို့ ရအောင်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. MTV Version ကိုဒီမှာ ကြည့်ပါဗျာ…….. Mp3 ကိုဒေါင်းယူနားဆင်ရန် Favorite
BIGBANG – (SOBER)
BigBang အဖွဲ့သားအားလုံးပါဝင်သီဆိုထားတဲ့သီချင်းအသစ်လေးပါ။ နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ MTV Download ရယူနိုင်ရန်ပေးထားပါတယ်။ MTV Download ရယူရန် Favorite
Fix Club 2015 (Korea Club Mix)
အရမ်းမိုက်တဲ့ Korea ရဲ့ Club တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fix Club ရဲ့ကြော်ငြာလေးပါ။ ကြည့်ကြည့်ပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်။ တီးလုံးတွေ လဲလန်းတယ်။ Mtv Download ရယူရန် Favorite
သီချင်းကောင်းလေးပါ။ Kpop ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေမှာပါ။ ကတာလဲလန်းတယ် တီးလုံးလဲလန်းတယ်။ ကောင်မလေးတွေလဲလန်းတယ်နော်။ Mp3 ကော MTV ကော Download ရယူနိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Mp3 Download ရယူရန် MTV Download ရယူရန် Favorite
[pro_ad_display_adzone id=”3692″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] Girls’ Generation ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်အခွေ Lino Heart ထဲက သီချင်းလေးပါ။ MTV ကော Mp3 ကော Download ပေးထားပါတယ်။ MTV ဒီမှာ Download ပါ Mp3 ဒီမှာ Download ပါ Favorite
Roll Deep – Hyuna Feat.Ilhoon of Btob
[pro_ad_display_adzone id=”3692″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] နာမည်ကြီး အဆိုတော် အဖွဲ့”4Minute ” အဖွဲ့ က Sexy ကျတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော် ” Hyuna ” ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ” Sexy ” ဘယ်လောက်ကျသလဲဆိုတာနားဆင်လိုက်ပါအုန်းနော် Video ကိုဒီမှာကြည့်ပါ Mp3 ဒေါင်းယူရန် Favorite
Kim Sori – Bikini
[pro_ad_display_adzone id=”3692″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] Kim Sori ရဲ့ Bikini သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီးပြီလား MTV နဲ့တွဲနားထောင်ကြည့်ပါ အရမ်းမိုက်တယ်နော် MTV Download ရယူရန် Favorite
[pro_ad_display_adzone id=”3558″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] Girls Generation ရဲ့ July7ရက်နေ့ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ Party သီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်ပါအုံး Youtube မှာ ၂ပတ်အတွင်း ကြည့်တဲ့သူ သန်း၂၀ ကျော်ပါတယ်။ MTV ကော Mp3 ကော အောက်မှာ Download ရယူပါ။ MTV Download ရယူရန် Mp3 Download ရယူရန် Favorite
If You Love Me – NS Yoon-G Feat.Jay Park
[pro_ad_display_adzone id=”3558″ flyin=”1″ flyin_position=”bottom-right”] ကိုရီးယား အဆိုတော်တွေထဲက ရုပ်လေးချောတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော် ” NS Yoon-G ” ရဲ့ သီချင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သီချင်းနာမည်လေးကတော့ ” If You Love Me ” တဲ့နော် အားလုံးပဲခံစားနားဆင်ပေးပါအုန်းဗျာ…. Mp3 ဒေါင်းယူရန် Video ကိုဒီမှာကြည့်ပါဗျာ…… Favorite
Korea က ကောင်မလေးတစ်ယောက် Big Bang သီချင်းကို Drum ဖြင့်တီးခတ်ခြင်း
ကိုရီးယားက ကောင်မလေး တစ်ယောက် လမ်းပေါ်မှာ Drum နဲ့ Big Bang သီချင်းကို လှလှပပ တီးခတ်ပြသွားတဲ့ MTV လေးပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်နော်။ Drum တီးခတ်တဲ့ လူတွေလေ့လာကြည့်ပါအုံး။ Favorite